5 Calaamadood Oo Lagu Garto In Lamaanahaaga Aad Kaligaa Jeceshahay (Xiriir Hal Dhinac Ah) | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»5 Calaamadood Oo Lagu Garto In Lamaanahaaga Aad Kaligaa Jeceshahay (Xiriir Hal Dhinac Ah)
Aayaha editor Send an email February 20, 2019
Waxaan idiin soo gudbineynaa 5 calaamadood oo hadaad lamaanahaaga ku aragto ku tusinaya inaad ku jirtid xiriir hal dhinac ama kaligaa inaad jeceshahay qofkaas.
1. Laguguma qiimeeyo wax kasta oo aad sameyso
Qofka ku jira xiriirka halka dhinac ah ama kaligiis wax jecel waa qof wax badan u sameeya lamaanihiisa si uu xiriirka uga dhigo mid shaqeeya balse waxaa nasiib darro ah in lamaanahaaga uusan kuu arkin qof wax qiimo leh ama wanaagsan sameeyay.
Dadka ku jiro xiriirada noocaas ah waxay sameeyaan dadaal walba, sidaas oo ay tahay hadana laguma qiimeeyo dadaalkooda. Xiriirka noocaas ah waa mid qofka dareensii kara inaan la qiimeyn isla markaana aanan la siinin qadarintii uu mudnaa.
2. Tallaabo kasta adiga ayaa qaada
Marka ay noqoto inaad adiga sameyso tallaabo kasta, haddii ay noqon lahayd, ballamaha kulanka, inaad kaligaa booqato isla markaana adiga lee aad wacdo maalin kasta, waxaad ku jirtaa xiriir hal dhinac ah ama kaligaa ayaa qofka jecel.
Xiriirka markay noqoto, waa in labada qofood ay iswada wacaan isla markaana waxyaabaha muhiimka ah si wadajir ah uwada qabtaan.
3. Adiga kaliyaa ayaa tanaasula, lamaanahaaga ma tanaasulo
Way adagtahay inaad aragto xiriir guuleysta iyadoo labada lamaane aysan isu tanaasulin. Labada lamaane waa inay diyaar u noqdaan inay isku tanaasulaan haddii la doonayo in xiriirka uu horey u socdo.
Si’kastaba, haddii hal qof uu mar kasta sameeyo wax kasta oo naf hur ah ama uu tanaasulo, kaasi waa xiriir hal dhinac ah.
4. Intuu waqti kula qaadan lahaa wuxuu jecelyahay in saaxiibadiis uu la qaato
Marka lamaanahaaga waqti inuu kula qaato uu ka doorbido inuu saaxiibadiis la qaato, taasi waa calaamad ku tuseysa inaad ku jirto xiriir aad kaligaa wax jeceshahay.
In lamaanahaaga saaxiibadiis waqti uu la qaato way wanaagsantahay balse waxaa saaxiibadiis ka horeeya adiga oo ah qofka ku weyn.
5. Waxyaabo aadan sameyn ayaad ka raali gelisaa
Marka aad had iyo jeer dareento baahida loo qabo inaad raali gelin ka bixiso waxyaabo aanan micno lahayn oo xitaa aadan sameyn taasi waa calaamad kale oo ku tusineysa inaad ku jirto xiriir hal dhinac ah.
Inaad noqoto qof raaligelin bixiya waa wax wanaagsan waxayna caawineysaa xiriirka laakiin waa inaysan noqon xal aad sameyneyso.
Markaad lamaanahaaga ka raali geliso waxyaabo aadan sameyn ama aanan micno lahayn dabadeed taasi waa raali gelin aad ku ilaalineyso qof kale farxaddiisa.
7 Waxyaabood Oo Xoojiya Difaaca Jirka